Service zakhawuleziswa - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Ukuphuhliswa kobugcisa yokuvelisa ngendaleko kwenkqubo kungamampunge PCB kuvumela abavelisi PCB ukushicilela PCBs enzelwe isiko ndibanikele kubaxhasi kwiintsuku.
Standard PCB ixesha Lead
Apha PCB nguMmangaliso, ixesha ekhokelayo libhekisela kwixesha esikudingayo ukuze ziprintwe iibhodi circuit kungamampunge. Ibalwe ukusuka kwiintsuku zomsebenzi yesibini kulandele irisithi yakho ukuze yentlawulo kunye ifayile isiqinisekiso. Nceda qaphela ukuba aliquki iiholide okanye ngeempelaveki.
Ngokubanzi, ixesha lethu phambili lixhomekeke kubunzima kuyilo yesekethe wakho kunye neemfuno zakho. Siya ukuba unako ngere- iiplanga imini 3-7. Ke ukuba imveliso PCB umgangatho, sinikezela 3 kukhokela iinketho ixesha. Nceda ujonge le theyibhile ilandelayo ulwazi eneenkcukacha. Ungakhetha oyifunayo ixesha lakho phambili xa ngokucaphula intanethi, siza ukubala iindleko PCB ngokusekelwe efunekayo ngexesha lwakho ngokufanelekileyo.
PCB zakhawuleziswa Service
Ukuqwalasela ezinye iiprojekthi yimfuno ucwangciso elifutshane kakhulu, ingakumbi xa uchitha ixesha elininzi kwi kuyilo PCB okanye lobunjineli isigaba kwaye kufuneka ukubamba up kunye nemveliso, sinikezela PCB zakhawuleziswa Service akuncede udibana osikiweyo. Sicela nabakwaziyo ukushicilela iibhodi yakho PCB ngumgangatho elifanayo ophezulu njengoko wabathembisayo Standard PCBs Iinkonzo yethu iqala ukususela kwimihla-2. kwentlawulo engaphezulu iya kwenzeka ngenxa nokukhawulezisa imiyalelo yakho PCB.
Funa umyalelo PCB engxamisekileyo? Zive ukhululekile ukuxoxa iimfuno zakho nathi wonderful@wonderfulpcb.com .